တဒ်ဘန်ဒီ - ဝီကီပီးဒီးယား
သီအိုဒေါရောဘတ်ဘန်ဒီ (အမည်ရင်း သီအိုဒေါရောဘတ်ကောင်းဝဲလ်၊ ၁၉၄၆ နိုဝင်ဘာ ၂၄ - ၁၉၈၉ ဇန်နဝါရီ ၂၄) သည် ၁၉၇၀ ခုနှစ်များအတွင်း (သည့်ထက်လည်း စောဖွယ်ရာရှိ) က မိန်းမရွယ်နှင့် မိန်းခလေးငယ်များအား ပြန်ပေးဆွဲ၊ မုဒိမ်းကျင့်၊ လူသတ်ခဲ့သော အမေရိကန် ကွင်းဆက်လူသတ်သမား၊ လူသေနှင့် မေထုန်မှီဝဲသူ တစ်ဦး ဖြစ်သည်။ ဆယ်စု နှစ်များစွာ ငြင်းဆိုခဲ့ပြီးနောက် ၁၉၈၉ ကွပ်မျက်ခံရခါနီးသည့်အခါမှ ၁၉၇၄ နှင့် ၁၉၇၈ အကြား ပြည်နယ် ၇ ခု၌ ကျူးလွန် ခဲ့သော လူသတ်မှု ၃၀ အတွက် ဝန်ခံခဲ့သည်။ သားကောင်အရေအတွက်မှန်ကို မသိရှိရဘဲ ပိုများနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။
သီအိုဒေါ ရောဘတ် ကောင်းဝဲလ်
(၁၉၄၆-ဖော်ပြချက် အမှား - နားမလည်သော ပုဒ်ဖြတ် စာလုံး "၁"။-၂၄)နိုဝင်ဘာ ၂၄၊ ၁၉၄၆
ဘာလင်တန်၊ ဗားမောင့်၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
ဇန်နဝါရီ ၂၄၊ ၁၉၈၉(1989-01-24) (အသက် ၄၂)
ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်၊ ဘရက်ဒ်ဖော့ဒ် ကောင်တီ၊ ဖလော်ရီဒါ၊ အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု
Body cremated in Gainesville, Florida; ashes scattered at an undisclosed location at Cascade Range, Washington.
Carole Ann Boone (m. 1979–86)
အယ်လင်နော လူးဝီး ကောင်းဝဲလ် (မိခင်)
ဇွန် ၇၊ ၁၉၇၇ – ဇွန် ၁၃၊ ၁၉၇၇
ဒီဇင်ဘာ ၃၀၊ ၁၉၇၇ – ဖေဖော်ဝါရီ ၁၅၊ ၁၉၇၈
၃၀ ဟု ဝန်ခံ၊ စုစုပေါင်း အတည်မပြုနိုင်သေး
၁၉၇၄ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ – ဖေဖော်ဝါရီ ၉၊ ၁၉၇၈
၁၉၇၅ ဩဂုတ် ၁၆
သူ၏ သားကောင်မိန်းမပျိုများစွာက သူ့အား ချောမောပြီး လူချစ်လူခင်များသည်ဟု သဘောထားကြသည့်အတွက် ဤအချက်အား အခွင့်ကောင်းယူပြီး ယုံကြည်မှု ရယူခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။ သူ၏ သားကောင်များကို လူသူကင်းရှင်းရာအရပ်၌ နိုင့်ထက်စီးနင်း ရိုက်နှက်မှုမပြုမီ ထိခိုက်အနာတရ သို့မဟုတ် မသန်စွမ်းသော်လည်းကောင်း တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်လေဟန်နှင့် လူမြင်ကွင်း၌ ချဉ်းကပ်လေ့ရှိသည်။ ဒုတိယတန်းစား မှုခင်းကျူးလွန်ရာနေရာသို့ ထပ်မံသွားရောက်ပြီး ပုပ်သိုးစပြုနေသည့် အလောင်းကောင်များအား ပြင်ဆင်ပေးကာ လိင်ဆက်ဆံတတ်သည်။ ပုပ်သိုးရိရွဲသွား၍ဖြစ်စေ တိရစ္ဆာန်အရိုင်းများ၏ ဖျက်ဆီးမှုကြောင့်ဖြစ်စေ ယင်းသို့ဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုနိုင်တော့သည်အထိ ပြုမူတတ်သည်။ သားကောင် အနည်းဆုံး ၁၂ ဦးအား ခေါင်းဖြတ်ပြီး ခေါင်းပြတ်များကို အမှတ်တရအဖြစ် သူ၏ တိုက်ခန်းတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ ရံဖန်ရံခါ၌ ညအချိန် အိမ်များတွင်း ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီး သားကောင်များအား အိပ်ပျော်နေစဉ် သတ်ဖြတ်တတ်သည်။
အနာတရဖြစ်စေသော ပြန်ပေးဆွဲမှုနှင့် ရာဇဝတ်မြောက်သော တိုက်ခိုက်မှုအတွက် ယူတာ၌ အကျဉ်းကျခံရစဉ်အခါ ၁၉၇၅ တွင် ဘန်ဒီ ပထမဆုံးအကြိမ်အဖြစ် ထောင်ကျသည်။ ပြည်နယ်အများအပြား၌ တစထက်တစ ရှည်လျားများပြား လာသည့် မဖော်ထုတ်နိုင်သော လူသတ်မှုများနှင့်ပတ်သက်ပြီး သူ့အပေါ် သံသယရှိလာသည်။ ကော်လိုရာဒို၌ လူသတ်မှုစွဲချက်နှင့် ရင်ဆိုင်နေရစဉ် ၂ ကြိမ်တိုင်တိုင် ရုပ်ရှင်ဆန်ဆန်လွတ်မြောက်မှုကို အကွက်ချစီစဉ်နိုင်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၈ ၌ နောက်ဆုံးပြန်လည် အဖမ်းမရခံမီ လူသတ်မှု ၃ ခုအပါအဝင် နောက်ထပ် တိုက်ခိုက်မှုများကို ဖလော်ရီဒါ၌ ထပ်မံကျူးလွန်ပြန်သေးသည်။ ဖလော်ရီဒါပြည်နယ်တွင်း လူသတ်မှုများအတွက် သီးခြား ရုံးတင်စစ်ဆေးမှု ၂ ခုမှ သေဒဏ် ၃ ကြိမ်ချမှတ်လိုက်သည်။ ဘန်ဒီအား ၁၉၈၉ ဇန်နဝါရီ ၂၄ တွင် ဖလော်ရီဒါ ပြည်နယ်အကျဉ်းထောင်၌ လျှပ်စစ်ကုလားထိုင်ဖြင့် သေဒဏ် စီရင်ခဲ့သည်။
ဘန်ဒီနှင့် ယခင်က လက်တွဲလုပ်ကိုင်ဖူးသူ အတ္ထုပတ္တိစာရေးဆရာ အန်းရူးလ် က ဘန်ဒီအား "အခြားလူသားတစ်ဦး၏ နာကျင်မှု ၊ သေသည်အထိ နှင့် သေပြီးအခြားမဲ့၌ သားကောင်များအပေါ် လွှမ်းမိုးနိုင်မှုမှ ပျော်ရွှင်မှုရယူသည့် ကြမ်းတမ်း ရက်စက်သည့် ဆိုစီယိုပါ့သ် တစ်ဦး" ဟု သရုပ်ဖော်သည်။ ဘန်ဒီကိုယ်တိုင်က "တွေ့ဖူးသမျှလူအားလုံးထဲကမှ သွေးအအေး ဆုံး ခွေးမသား" ဟု ကိုယ့်ကိုကိုယ် ရည်ညွှန်းဖူးသည်။ နောက်ဆုံး ခုခံချေပရှေ့နေအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင် ရှေ့နေ ပေါ်လီနယ်လ်ဆန် က "နှလုံးသားမရှိတဲ့ မကောင်းဆိုးဝါး" ဖြစ်သည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။
↑ နယ်လ်ဆန် ၁၉၉၄, pp. 323, 327.
↑ 1982 Bundy appeal brief။ law.fsu.edu။ Supreme Court of Florida (December 15, 1982)။ June 7, 2011 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ July 14, 2010 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Bundy Electrocuted After Night of Weeping, Praying : 500 Cheer Death of Murderer"၊ Los Angeles, California: Tronc၊ January 24, 1989။ July 16, 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ Archived from the original on July 18, 2016။
↑ Hare၊ Robert D. (1999)။ Without Conscience: The Disturbing World of the Psychopath Among Us။ New York: The Guildford Press။ p. 23။ ISBN 978-1-57230-451-2။ CS1 maint: ref=harv (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=တဒ်ဘန်ဒီ&oldid=492451" မှ ရယူရန်
၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၇:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၅ နိုဝင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၀၇:၂၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။